"Van Dijk Ayaa Naga Maqan Marmarsiiyo Ma Noqoto" - Jamie Carragher Oo Si Kulul U Canaantay Xiddigaha Liverpool & Taageerayaashooda | Laacibnet.net
“Van Dijk Ayaa Naga Maqan Marmarsiiyo Ma Noqoto” – Jamie Carragher Oo Si Kulul U Canaantay Xiddigaha Liverpool & Taageerayaashooda
Jamie Carragher ayaa ku canaantay kooxdiisa hore ee Liverpool qaab ciyaareedka xun ee ay ku jirto isagoo sheegay inaysan marmarsiiyo ka dhigan karin inuu dhaawac kaga maqan yahay Virgil van Dijk.
Tan iyo markii la soo galay sannadkan 2021, Liverpool waxay noqotay koox jilcan oo iska garaaco iyadoo laga badiyay afar kulan oo isku xigta horyaalka Premier League.
Lix kulan oo isku xigta kuma aysan badinin gurigooda oo afar ka mid ah laga badiyay, waxay guuldarro ka soo gaartay Burnley, Brighton, Manchester City iyo Everton halka ay barbaro la galeen Manchester United iyo West Brom.
Guuldaradii ka soo gaartay Everton Sabtidii waxay aheyd guuldaradii ugu horeysay ee gurigooda ay uga badiso Everton tan iyo 1999, waana markii ugu horeysay tan iyo sannadkii 1923 oo Liverpool gurigeeda looga badiyo afar kulan oo isku xiga horyaalka Ingariiska.
Isagoo ka hadlayay barnaamijka Monday Night Football ee ka baxa Sky Sports, Carragher ayaa sheegay in Liverpool ay aheyd inay badiso dhamaan kulamadeeda oo dhan marka laga reebo kulankii City.
“Aad ayaan u dhaleeceeyay Liverpool markii aan tabinayay ciyaartii Evefrton, waxaana u muuqday mid ka careysiiyay qeyb ka mid ah taageerayaasha” ayuu yiri daaficii hore ee Liverpool.
“Waxaan falanqeynayay kooxdaan Liverpool muddo seddex sannadood ah oo ay ugu fiicnaayeen uuna hogaaminayay Klopp, marka aan barnaamijyada kan oo kale ah ka soo muuqdo, waxay taageerayaasha kale igu oran jireen inaan u janjeero dhanka Liverpool.
“Kooxda heysata horyaalka Premier League, koobka Champions League ahna kooxda ugu fiican dunida. Ma jirin wax xun oo laga sheego. Laakiin haatan waa ay jirtaa.
“Haddii aan ka careysiiyay taageerayaasha Liverpool ma doonayo inaan raaligelin ka bixiyo. Wixii ay kooxdaan qabatay waa cajiib, waan jecel nahay, laakiin taasi lama micno ahan inaan la dhaleeceyn karin.
“Dhibaatooyinka Liverpool heysta, daafacyo dhexe oo maqan, xiddigo khadka dhexe oo daafac dhexe ka dheelaya, taasi lama micno ahan inaysan gurigeeda uga badin karin Everton, Brighton, Burnley, West Brom.
“Marmarsiiyo ma noqoneyso taas. Waxba ma ahan dhibaato kasta oo ku soo foodsaarta, marka aad tahay ciyaaryahan Liverpool ma dhici karto inaadan badinin lix kulan oo gurigaaga ah. Taasi lama aqbali karo.
“Waa qasab inay helaan qaab ay ku badin karaan. Ma doonayo in marmarsiiyo laga dhigto Van Dijk sababtoo ah Liverpool waxay kulankii Everton ku soo bilowday 10 xiddig oo Champions League ku soo guuleysatay.”
AKHRISO: Mushaharka Ciyaartoyda Liverpool Oo La Shaaciyey & Malaayiinta Ay Qaataan Xiddigaha Dhaawaca Ahi
Xiddigihii Ka Dhaawacnaa, Laacibkii Uu Aabbihii Dhintay Iyo Klopp Oo Sharraxay Xiddigaha Uu Haysto Kulanka Axadda
Ronald Koeman Oo Shaaciyey Xiddigaha Barcelona Ee Kulanka Adag Ee Sevilla & Laacibka Weyn Ee Liiska Laga Reebay